Igbo, John: Lesson 130 - Nkwenye nke Jọn na ozioma ya (Jọn 21:24-25) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 130 (The witness of John and his gospel)
d) Nkwenye nke Jọn na ozioma ya (Jọn 21:24-25)
24. Ma nka bu onye nēso uzọ-Ya nke nēb͕a àmà bayere ihe ndia, de kwa ihe ndia. Anyị maara na àmà ya bụ eziokwu.
N'ebe a, anyị na-achọpụta eziokwu anọ dị mkpa:Onye na-ezisa ozi ọma dị ndụ mgbe e bipụtara ozi ọma ya, ma mara amara n'etiti ndị ụka Grik. Ọ nọgidere bụrụ onye na-eso ụzọ Jizọs malite n'oge Onye Baptist ruo mgbe Kraịst rịgoro n'eluigwe.
Jọn bụ onye àmà banyere Jizọs Kraịst. Ọ nụrụ okwu Jizọs wee dekọọ ha, dịka ọ na-edekwa ihe ịrịba ama ahụ. Ọ bụghị onye ụka nke dere akwụkwọ ozi a, mana Jọn n'onwe ya dịka onye a hụrụ n'anya.
Ikekwe ọ naghị eji asụsụ Grik eme ihe, n'ihi ya, ọ gwara otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị nwere nkà mmụta asụsụ. Ihe ọ pụtara bụ ihe doro anya, eziokwu ahụ agbanweghi agbanwe. Ndị na-ekesa ozioma kwetara na otu olu na onye àmà Jọn nwere ntụkwasị obi niile. Nkwado a dị mkpa, ebe ozioma ozioma dị iche na ihe ozioma ọzọ. Obi dị anyị ụtọ na ozioma a pụrụ iche site n'aka onye ahụ hụrụ n'anya bụ otu n'ime akụ anyị.
Ndi mmadu ndi kwusara ozi oma a n'ekpughe oke nke Kraist nime ndu ha, mgbe ha natakwara ya, ha nwere ike ibu umu nke Chineke, kwere na aha Ya. Mmụọ Nsọ wee dakwasị ha, bie n'ime ha ma mee ka ha mara ọdịiche dị iche iche mmụọ ọjọọ. Ha ghọtara eziokwu site n'egha ụgha na ikwubiga okwu ókè, ebe ha nwetara Mmụọ nke Nkasi Obi iji duzie ha n'ime eziokwu niile.
25 E nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ Jizọs mere, nke ọ bụrụ na a ga-ede ha nile, echere m na ọbụna ụwa n'onwe ya agaghị enwe ohere maka akwụkwọ ndị a ga-ede.
Ụfọdụ ndị na-ahụ ịdị adị nke ozioma anọ dịka ịsụ ngọngọ. Ọ bụrụ na anyị agụnye akwụkwọ ozi ozioma ọzọ (dịka o gosipụtara ya), anyị nwere ise, dịka ndụ nke ezi Onye Kraịst bụ ozioma n'onwe ya. Onye dere akwụkwọ ozioma nke Jọn kwupụtara na ọ nụrụ ọtụtụ okwu na omume Jizọs site n'aka ndị na-eso ụzọ, na ọ pụghị ịchịkọta ha niile. Izuzu nke Chineke bi n'ime ya. Ọbụna taa ọ na-ebi na Chọọchị Ya ma na-eduzi ya ka ọ na-agbaso nzọụkwụ ya. Ọ bụrụ na anyị ga-anwa idebe ọrụ nile nke Jizọs site na nbilite n'ọnwụ ya ruo n'oge anyị, ọ bụghị akwụkwọ na tomes niile ga-ezu maka nzube ahụ. Ndị Kraịst ga-adị mkpa ruo mgbe ebighi ebi ịghọta oke, ịdị obosara, omimi na ogologo nke ịhụnanya Kraịst na-arụ ọrụ n'akụkọ ihe mere eme nke ihe a kpọrọ mmadụ.
Onyenwe anyị dị ndụ na-arụ ọrụ site na okwu ya dịka e dekọrọ n'Agba Ọhụụ. Anyị na-ewere onwe anyị onye a gọziri agọzi, n'ihi na anyị na-anụ olu ya, ghọta echiche ya ma soro oku ya. Jọn gosiputara ịhụnanya nke Jizos Kraist, ka madu nile wee kwuputa, "ayi ahuwo otuto ya, dika otuto nke nwa amuru nke Nna ya, juputara n'amara na ezi-okwu: site na njuputa-ya ka ayi onwe-ayi nile natara, amara na amara."
EKPERE: Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, maka ime ka ohu gị bụ John dee ozioma nke ịhụnanya gị. Ị na-agwa anyị okwu site n'okwu ya. Anyị na-ekele gị maka ọmịiko gị, okwu gị, omume gị, ndụ, ọnwụ na mbilite n'ọnwụ. I kpugheere anyị Nna anyị ma gbaghara anyị mmehie anyị. I nyewo anyi ndu ohuru site na Mo Nso.
Gịnị ka ndị nyere Jọn ozi ọma na-agba akaebe?
NNOYCHA - 7
Ezigbo onye na-agụ akwụkwọ,
zitere anyị azịza ziri ezi maka 20 n'ime ajụjụ 24 a. Ọ bụrụ na ị zara ajụjụ ndị a chọrọ n'aka akwụkwọ nta isii nke usoro isiokwu a, anyị ga-ezitere gị akwụkwọ akaebe nke na-agba akaebe na ịdị ike gị n'ịmụ ozioma nke Jọn.
Olee njikọ dị n'etiti Jizọs na Pita n'oge a gbara ajụjụ ọnụ n'ihu Annas?
Didie ke Jizos edi Edidem?
Gini ka anyi naam site n'ihe osise nke Jizos etiworo, uwe] cha na okpu ogwu?
Gịnị ka aha ahụ e debere n'elu cross?
Gịnị bụ okwu atọ nke Jizọs?
Gini ka any i na-am uta site n'eziokwu ah u na a na-emebis igh i Kraist?
Gini ka ili Jizos na-akuzi anyi?
Gini bu ihe omuma nke ato maka mbilite n'onwu nke Kraist?
Gini ka Jon kwenyere mgbe o na-abanye n'ili n 'onw u?
Gini mere Meri kwusiri icho aru nke Onye-nwe Jisos rue mgbe o gosiputara onwe ya nye ya n'aha ya?
Gini bu ozi nke Kraist n'olu Meri Magdalini nye ayi?
Gini bu okwu nke mbu nke Jisos gwara ndi neso uzo ya mgbe nbilite n'onwu?
Gịnị mere ndị na-eso ụzọ ji ṅụrịa ọṅụ?
Gini bu ihe di iche banyere iziputa ndi neso uzo?
Ònye bụ Mmụọ Nsọ? Kedu ihe ọ na-eme site na àmà gị nye Kraịst?
Gini ka nkwuputa Tomasi bu?
Gịnị mere Jizọs ji kpọọ ndị kwere ekwe bụ ndị 'na-agọzi' ndị na-ahụbeghị ya?
Gini ka Jizos kwughariri n 'a ngw us i nke ozioma ya?
N'ihi gịnị ka ọtụtụ mmadụ ji bụrụ ihe ihere nke na-eso ndị na-eso ụzọ?
Gini ka ihe banyere Jizos na Pita kporogi?
Olee ot 'u Pita si nye Chineke otuto?
Gini ka okwu ikpeazu nke Kraist n'akwukwo ozi a putara?
Gini ka ndi nyere Jon ozioma ji agba akaebe?
Echefukwala ide aha gị na adreesị zuru ezu na nhazi akwụkwọ ahụ, ọ bụghị naanị na envelopu ahụ. Ziga ya na adreesị na-esonụ: Mmiri nke Ndu
P.S. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-amụ Bible na anyị, anyị dị njikere iziga gị akwụkwọ nta ndị ọzọ na ntụgharị uche na akwụkwọ ọzọ nke Akwụkwọ Nsọ.
Page last modified on March 05, 2020, at 07:01 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)